मापदण्ड विपरीत घर टहरा बनाउने आफ्नै बुवा भए पनि छोड्दिन - समायोजन खबर
दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका नगर प्रमुख दिपनारायण रिजाल।
दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले गएको सोमबारदेखी मध्यपहाडी लोकमार्ग सडकको दायाँबायाँमा मापदण्ड विपरीत बनेका टहरा हटाउन थालेको छ । हालसम्म नगरपालिकाले १० वटा टहरा भत्काएको छ । नगरपालिकाले मापदण्ड विपरीतका टहरा भत्काउदै गर्दा स्थानीयहरुले केही अवरोध गरे भने, आक्रोशित पनि बनेका छन् । यहि विषयमा दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका नगर प्रमुख दिपनारायण रिजालसँग गरिएको कुराकानीको संम्पादित अंश ।
मापदण्ड विपरीत बनेका टहरा हटाउन सुरु भएको छ । यो गर्नैपर्ने काम हो ?
टहरा हटाउदा/भत्काउदा विना जानकारी, मनपरी भत्काइयो भन्ने आरोप छ ?
आरोप त जे लगाउदा पनि भइहाल्छ नि । आरोप भनेको आरोप हो नि त हैन ? आरोप जे लगाउदा पनि हुन्छ नि । तर, कानुन र परिधीमा रहेका मापदण्ड विपरीत बनेका घर टहरा नगरपालिकाले जुनसुकै बेला पनि भत्काउन सक्छ । यति बुझ्दा हुन्छ ।
दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका नगर प्रमुख दिपनारायण रिजाल ।
त्यस्तो चाँहि कुन हो पहिचान हुनुप-र्यो । मैले सुरुवात देखी नै भनेको छु मापदण्ड विपरीत घर टहरा बनाउने आफ्नै बुवा भए पनि म छोड्दिन । आफ्नै बुवा भए पनि म छोड्दिन भनेपछि त भोट दिएका/नदिएका कोही हेरिन्न । कसैलाई काखा, कसैलाई पाखा गरिन्न । मुआब्जा खाएको छ । घर भत्काएको छैन भने, उसको घर अनिवार्य भत्किन्छ ।
मापदण्ड विपरीत बनेका घरहरु चार वटा छन् । उहाँहरुलाई हामीले पुनरावेदन गर्ने अवस्थामा पुगेका छौ । ति चार घर अन्तिम फैसलाको स्टेजमा छ । बाँकी घरहरुको प्रक्रियामा छौ । केही घरहरु भत्काउने शन्र्दभमा केही प्रक्रियाहरु छन् । त्यो प्रक्रिया हामी पूरा गदैछौ । र, पहिलो चरणमा टहराहरु भत्काइसकेपछि/हटाएपछि दोश्रो चरणको कार्यक्रम चाँहि घरहरु भत्काउने छ ।
जबसम्म नियम विपरीत बनेका टहरा भत्काई सकिन्दैन त्यतिञ्जेलसम्म हामी टहरा हटाउनमा लाग्छौ । अनि त्यसपछि मापदण्ड विपरीतेका घर प्रक्रिया पुरा नगरेका घर भत्काउने कार्यमा लाग्छौ । प्रस्तुती चिसाङ शेर्पा
२०७६ साउन २३ गते साँझ ७ :०१ मा प्रकाशित